Ukuze uqale, kubalulekile ukuphawula lokho ongwaqa sonorous ngolimi Russian. Kuzwakala ukuthi kuthiwa ngezwi, cishe ngaphandle umsindo. Lezi zihlanganisa [l] [m] [p], [L '], [m], [p], [j].
ongwaqa sonorous Ikakhulukazi
Bahlukile ukuthi zifana njengasezinsukwini onkamisa ongwaqa. Kusukela imisindo ikhala kubo ezahlukene wukuthi nabamhlongoze kuthiwa, umsindo cishe inaudible. Abazange abhanqiwe imisindvo abayizithulu noma sonorous. Yingakho sonants akhenge atjho nelilodwa ekupheleni ingezwakali noma yegama noma ngaphambi bengakhulumi nemisebenti yekwakha emagama. Isibonelo esihle kungaba isibani izwi lapho [m] uphinyiswa ikhala ngaphambi unvoiced [n]. ongwaqa ezinomsindo unvoiced kungukuthi liphinyiselwe akuveza phambi imisindo efanayo, njengoba kwenzeka, isibonelo, igama, sicela, okuyinto thina esiprofethweni [proz'ba]. Nokho, akufanele aphathe imisindo sonorous kuya unkamisa. Noma kunjalo, ngenkathi zizwakala isithiyo kwenzeka emlonyeni. Ngakho kukhona umsindo, kodwa lokhu nobuntu onkamisa. Futhi, lezi imisindo unenye isici esibalulekile lapho enquma onkamisa. Of them cha akha isilebhuli. Qaphela ukuthi ejwayelekile isiRashiya, t. K. Ngokwesibonelo, e-Czech imisindo sonorant babe izici ezifana. Lezi imisindo kungaba okuqinile futhi ethambile, babe izindlela ezahlukene ukwakha.
Kanjani umsindo [l]?
Ukuze uthole umsindo kwesokudla, ithiphu olimi kumele kube ngemuva ngamazinyo aphambili. Futhi uma ayiwufinyeleli endaweni emisiwe, lokukhenceza kwaso siphazamisekile, kanti amacembe esikhundleni esikebheni - "uodka". Uma umsindo kuyinto isikhundla elithambile, ulimi kumele agxishiwe kuya-alveoli. Kwenzeka ukuze okuqinile umsindo [l] kunzima ngempela ukuba silungise. Khona ungazama phusha phakathi kolimi lwakho asho umsindo. Kodwa isenzo esinjalo kufanele kwenziwe kuphela phakathi nokuqeqeshwa. Ngakho, siyabona ukuthi akuwona wonke sonants ngolimi Russian amenable ukusolwa.
umsebenzi kubalulekile indlela efanele yokubiza amagama of ongwaqa sonorous
Abantu abaningi nakancane ukuthi umsebenzi ukulungisa yokubiza imisindo ngabanye kuyize. Bayaqiniseka ukuthi le ndlela kuyinto ayizwakali ngokuphelele. Vele ukuqonda isimiso sendlela kahle athi sonants, nakho konke ngeke umbuthano egcwele. Eqinisweni, akuyona. Umkhuba uyisidingo. Futhi ngokuvamile iqala umsindo [m]. Lokhu kungenxa yokuthi uphinyiswa zemvelo kakhulu, futhi isetshenziswa ngisho yoga amazwi aphindaphindwayo.
Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi Latin Sonorus - is "ukushaya". imisindo ezinjalo ayibhangqene abayizithulu futhi babizwa nangokuthi acinene futhi abushelelezi. Phela, nabo basuke akhiwa fudlana air okudlula ulimi, namazinyo nezindebe. Akangenelanga, nomsindo uphinyiswa ngokushelela. Kubhekwe lezivakashi [n] [m]. Ukuze ukwakheka imisindo efana izindebe zivaliwe uvalwe, kodwa emoyeni kukhishwa ngalo ingaphakathi acinene. Kunezinhlobo ezintathu umzimba ephumelela kunazo ukuqeqesha ukuphimisa ongwaqa sonorous:
Eyokuqala - kuyinto ukuphindaphinda ibinzana, equkethe inqwaba imisindo efanayo. Kaningi, ngemisho ezinjalo kungabonakala amazwi ongaziwa eziye zasetshenziswa neze, kodwa kudingeka ukuze kusetshenziswe amagama. Kungcono uma kwenziwa okufanayo umoya futhi acinene umsindo.
Lo musho olandelayo kufanele kube nzima kakhulu. Kuvamise eside, ngakho ukusho kwelinye umoya kunzima. Kungcono nje izabelo futhi okumelwe ukusho kubantwana acinene umsindo.
Umusho wokugcina isikhathi eside. Kodwa kungcono ukwehlukana zibe izingxenye ezimbili. Okokuqala ukwenza, kanye izivivinyo ababili bokuqala, kodwa phambi kwelesibili udinga sengidonsa umoya bese uthi, kahle, uma une into ukuthumela off ku ibanga. Ngakho kufanele ukuthuthukisa "indiza" kwezwi. Zonke lezi umzimba kuzosiza ukufunda ukulibiza sonants uma enze njalo.
Inzuzo Participial. kwetimphawu ngamazwi esithi amabinzana, gerund futhi participial
Lokuzaliswa gloxinia - inqubo elula, kodwa ezithakazelisayo